လိပ်ပုံနှိပ်စက်ကိုတရုတ်,ကြမ်းပြင်ကုန်းပတ်စက်,cz purlin လိပ် formers
ခေါင် ဦး ထုပ်လိပ်ဖွဲ့စည်းစက်
ခေါင် ဦး ထုပ်ဖွဲ့စည်းစက်
ခေါင်မိုးခေါင် ဦး ထုပ်လိပ်ဖွဲ့စည်းစက်
sd11-80c ပရိုဖိုင်းကိုအဘို့အ roller ရှပ်တံခါးကိုလိပ်ဖွဲ့စည်းစက်
ထိုင်ဝမ်အရည်အသွေး၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင်နှစ် ၂၀ ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသော bms မှပြုလုပ်ထားပါသည်။
စက် roller ရှပ်တံခါးကိုလိပ်
က c အမျိုးအစားသံမဏိ purlin လိပ်ဖွဲ့စည်းစက်
က c shaped လိပ်ဖွဲ့စည်းစက်
ထိုင်ဝမ်နည်းပညာစျေးနှုန်းနိမ့်ကြမ်းပြင်ကုန်းပတ်လိပ် formiing စက်
တန်ဖိုးနည်းခြင်း၊ ပေါ့ပါးခြင်း၊ ခွန်အားမြင့်မားခြင်း၊ တည်ဆောက်မှုကာလတိုတောင်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်လည်ပတ်ခြင်းတို့ကြောင့်အဆောက်အ ဦး ၏ကြမ်းပြင်များအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်25
သံမဏိဘား truss ကုန်းပတ်လိပ်ဖွဲ့စည်းစက်
အားကစားရုံများ၊ လေဆိပ်များ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ စက်ရုံများ၊ ဂိုဒေါင်များ၊ ကားဂိုဒေါင်များ၊
အရည်အသွေးမြင့်မား Downspout ပိုက်လိပ်ဖွဲ့စည်းစက်
yx18-728 မြှောင်းပုံ panel ကိုစက်
သုံး earloop မျက်နှာမျက်နှာဖုံးစက်
နံရံအလှဆင် panel (ကြော်ငြာ panel ကို) လိပ်ဖွဲ့စည်းစက်
wall အလှဆင် panel (ကြော်ငြာ panel) လိပ်ဖွဲ့စည်းစက် ၏ 1.main အင်္ဂါရပ်များ w အားလုံးအလှဆင် panel ကို (ကြော်ငြာ panel ကို) စက် လိပ်ဖွဲ့စည်းစက် ၏အားသာချက်များ ခေါင်မိုး panel ကို စက်သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် 1. အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်, ပေါ့ပါးပေမယ့်မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိကို, တိုတောင်းတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကာလနှင့်ပြန်လည်စက်ဝန်းအသုံးပြုမှု ပစ္စည်း 2.save မရှိစွန့်ပစ25
ကြော်ငြာ panel ကိုလိပ်ဖွဲ့စည်းစက်
နံရံအလှဆင် panel ကိုစက်
နံရံအလှဆင် panel ကိုစက်လိပ်ဖွဲ့စည်းစက်
သတ္တုအတွင်းပိုင်းအလှဆင်ပြား လိပ်ဖွဲ့စည်းစက် ၏ 1.main အင်္ဂါရပ်များ သတ္တုအတွင်းပိုင်းအလှဆင်ပြားများဖွဲ့စည်းစက်ကိုလှိမ့်သည် ၏အားသာချက်များ ခေါင်မိုး panel ကိုစက်တွေ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း: 1. အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်, ပေါ့ပါးပေမယ့်မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိကို, တိုတောင်းတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကာလနှင့်ပြန်လည်စက်ဝန်းအသုံးပြုမှု ပစ္စည်း 2.save မရှိစွန့်ပစ်။ 3.easy စစ25
dismount spacers အားဖြင့်အရွယ်အစားပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ထိရောက်သောအမြင့်ကိုပြောင်းလဲရန် roller များအားရွေ့ပြောင်းခြင်း၊ အမှန်တကယ်တွင်နှစ်လုံးတပ်နိုင်သောစက်၊ စီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်နှင့်နေရာချွေတာခြင်း။25
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ကိုဘောင်ဖွဲ့စည်းစက်
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ကိုစက်
ပထမစာမျက်နှာ 1234567 8910 နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ